1.How in ay tirtirto files junk on Windows
2.How in ay tirtirto files junk on Mac
3.How in ay tirtirto files junk on Android
4.How in ay tirtirto files junk on iPhone
5.Things waxaan u baahan nahay in ay is ogow of markii la tirtiro files junk
File qashinka ka aaladaha aad la Windows, Mac, Android ama iPhone, haynayaa meel degan oo inta badan kiisaska ku saabsan tahay junk aan la rabin. Marka laga nooca files junk, ay hoos u dhaqdhaqaaqa ee qalab aad. Khasnado ee biraawsarkaaga ee ay yeelan karaan junk files badan oo yar yar oo aad u yaabsan marar badan "sababta aan browser waxaa si gaabis ah ku furo?". The files aan la rabin ayaa laga yaabaa files ku meel gaar ah, files Mudanayaasha barnaamijka jir, thumbnails kaydin doono, oo dhami ku kaydsan ku saabsan qalabka, computer, laptop, kiniin, phone. Waxaad la yaabi doontaa si aad u ogaato in files junk mashquulin yaabaa badan oo GB galay habka.
Qeybta 1 Sida loo tirto faylasha junk on Windows (talaabo tutorial tallaabo la shaashada tallabo kasta si ay u muujiyaan qalliinka)
Si ka your computer Windows takhaluso files junk, isticmaali Nadiifinta Disk qalab ka mid ahaa in nidaamka qalliinka. Waxaa suurtogal kuu ah in aad tirtirto oo dhan xogta in aanad u baahnayn mar dambe, sida faylasha ku meel gaar ah, files ka recycle bin oo dheeraad ah.
Raac tallaabooyinkan fudud si aad u nadiifiso files junk ka Windows:
Utility Nadiifinta 1. Open digsi
Tag bilow, raadiyo Accessories ka dibna qalab System,. Waxaa waxaad ka heli doontaa utility Nadiifinta digsi ka. Guji ku yaal oo aad tirtirto doonaa dhammaan faylasha la rabin.
2. files junk Delete
Dooro dhamaan faylasha in aad dooneyso in aad tirtirto oo guji "tirto faylasha".
Part 2 Sidee in ay tirtirto files junk on Mac (talaabo tutorial tallaabo la shaashada tallabo kasta si ay u muujiyaan qalliinka)
Isticmaal qalabka Disk Utility ka macruufka Mac. Waa mid aad u fudud in ay ka heli in Codsiyada. Just raac tallaabooyinkan:
Tag Codsiyada iyo ka dib Utilities eegto. Waxaa waxaad ka heli doontaa aalad Disk Utility. Sidoo kale, waxaad ka heli kartaa iyada oo Barta bartamaha. Tubada Disk Utility iyo, markaas Aid First.
2. Isticmaal First Air / masixi
Si loo sameeyo nadiifinta sax ah, waxaad ku caddayn kartaa rukhsadda disk ah. Si kastaba ha ahaatee, Utility digsi ku nadiifiso doonaa, oo masixi files junk aad ka Mac.
Part 3 Sida loo tirto faylasha junk on Android (talaabo tutorial tallaabo la shaashada tallabo kasta si ay u muujiyaan qalliinka)
Qalab aad Android uu leeyahay dhowr files junk sabab ah barnaamijyadooda (xataa ka dib marka aad iyaga uninstall), in khasnado biraawsarkaaga ee, iyo wax badan oo ka mid ah faylasha sida sawirada aadan u baahnayn mar dambe. Si aad u nadiifisid files junk ka qalab Android aad ka, u tag Settings, General iyo Kaydinta. On meel Kaydinta aad arki doontaa oo dhan meel wadarta iyo size meel loo isticmaalo aad Apps, Pictures, Audio, Downloads, xogta soo urruriyey ah. Haddii aad rabto in ay nadiifiso files junk ah, garaac feature kasta oo aad la keeneen in doonaa ikhtiyaarka in ay nadiifiso xogta.
Qeybta 4 Sida loo tirto faylasha junk on iPhone (talaabo tutorial tallaabo la shaashada tallabo kasta si ay u muujiyaan qalliinka)
Your iPhone yeelan karaan wax badan oo file junk ee Safari ee khasnado, ama xataa files aan la rabin ayaa weli ku jirta barnaamijyadooda.
Raac tallaabooyinka hoose si aad u nadiifinta files junk ka iPhone:
1) Delete xogta lagu kaydiyaa ay barnaamijyadooda
Waxaad tirtiri kartaa xogta ku kaydsan by Chine iyadoo ay xulashada Isticmaalka ka Dejinta raacaya tallaabooyinka soo socda ah:
Tag Settings iyo raadiyo isticmaalka Guud. Ka dib, tuubada Maamul Kaydinta iyo waxyaabaha tuubada ka Documents iyo Data. Hubi waxyaabaha in aadan mar dambe rabto iyo tubbada Delete. Si aad u soo saarto xogta oo dhan app ee, ka jaftaa Edit ka dibna, Delete All.
2) Delete khasnado ka browser Safari
Khasnado ayaa xusuustiisa biraawsarkaaga sida xaqiiqada ah ayaa faylasha qaar ka mid ah, sida websites ha cockies loo siiyaa biraawsarkaaga si ay kuu siin waayo-aragnimo fiican booqashooyinka soo socda. Raac tallaabooyinka hoose si aad u nadiifinta Safari ee khasnado:
1. Search Safari hoos Settings
Tubada Settings aad iPhone iyo raadiyo Safari. Next, ka jaftaa Clear History iyo Website Data. Tallaabada ugu dambaysaa waxay tahay inaad ka jaftaa Clear History iyo Data.
2. Clear Safari`s khasnado, cookies
Haddii aad ku heshiin aqbalay cookies, waxaad u baahan doontaa wax badan oo cookies galay biraawsarkaaga. Waxaad iyaga hadda tirtiri kartaa, si sax ah.
Qeybta 5 Waxyaabaha aan u baahan in ay is ogow of markii la tirtiro files junk (abc)
Marka aan si kama tirto faylasha kale, soo kabashada xogta wondershare /dr.fone weli dammaanad possibilty inuu ka soo kabsado iyaga.
Tirtirka ee files junk waa tallaabo lagama maarmaan ah oo waa in aad si joogto ah u sameeyaan. Laakiin intii lagu nadiifiyo, waxaa suurto gal ah in sidoo kale ay tirtirto dhowr files in aad u baahan tahay in mustaqbalka. Haddii ay suurogal tahay inuu ka soo kabsado iyaga? Dhab ahaantii, way jiraan. Wondershare Data Recovery / Dr. Fone waa qalab loo isticmaalo qalabka macruufka, qalabka Android, mashiinada Windows, si ay u soo kabsadaan faylasha aad tirtiray shil. Si gaar ah in aad iskaan karo oo ku eegaan files kala duwan, ay ka mid yihiin fariimaha, taariikhda, sawiro, dokumentiyo, iyo dooran files in lagu soo celiyo.
> Resource > Mac > Sida loo tirto faylasha junk on Windows / Mac / Android / iPhone